विश्वास बेचिएको रात
संतोष थपलिया, (न्युयोर्क)
एउटा चुक कालो रात
हुरी, बतास र गर्जन बोकेर
निर्धक्क फोरेर पस्छ
कठोर बोल्दै जान्छ लगातार
देखिस तेरो विश्वास?
माया र विश्वासका पहाडहरु बोकेर
सपनी माया बोकेर
बिपनी विश्वास बोकेर
मानौं, मेरी हराएकी प्रियसी
बोकेर ल्याइदिए !!
कति उकाला चढिए
कति ओराला झरिए
यो कालो रात
परेड खेल्छ छातीमा
किन निचोर्छ छाति?
किन निथार्छ आँखा?
किन खोसिन्छ फुल?
किन ओछयाऊँछ काँडा?
किन खोस्छ विश्वास ?
कसरी ढाल्न सक्छ मुसाले?
मेरो विश्वासको पहाड कसरी
मुसासंग सुम्पीइन सक्छ?
यो निठुर कालो रात
पानी ओकलेकै छ
हुरी फुकेकै छ
हेर्दा हेर्दै मेरो विश्वासको पहाड
टुक्रा टुक्रा हुँदै
मेरै सामुन्ने ढल्छ
मेरो विश्वास ढलेको
लाचार र निसहाय हेर्दै
रुँदै, रुँदै अनि फेरी रुँदै
झर्दैछु विश्वास संगै
मेरो विश्वास बेचिएको रात
मेरो उज्यालो अस्ताएको रात !!!